> Resource > Music > Sida loo sameeyo Muqaal ah oo la Music
Maalmahan, waxaan u muuqdaan in ay ku kaydiso aragnimada jeer muhiim noo ah in sawiro iyo videos tan iyo kaamirooyin iyo kaamirada waa loo jecel yahay. Si aad si fiican u ilaasho, kuwaas oo xasuus macaan, ka dhigi slideshow la music, sawiro iyo videos waa fikrad wanaagsan. Waa sida adag ma aha sida aad u maleyneyso in tan oo dhan aad u baahan tahay waa: gaare slideshow sida Wondershare ah DVD Muqaal dhise , sawiro iyo videos aad rabto in aad si ay u muujiyaan, music si ay u tagaan oo ay la socdaan aad slideshow. Halkan waa tutorial ah oo ku saabsan sida loo sameeyo slideshow la music la barnaamijkan software slideshow awood badan.
1 Ku rakib software slideshow iyo soo dejinta sawiro iyo videos
Ku rakib software iyo dajiyaan aad sawiro digital in storyboard ah adigoo gujinaya '"Add Files" (jirto xaddidaadda tirada photos jirin). Waxa kale oo aad ku dari kartaa videos ka computer ama camera.
2 dar music in slideshow sawir aad
Tag ah "shakhsiyeeyo" tab. Guji "Music" toolbar ku darto music asalka ama kaliya jiidi music ah si ay ula socdaan asalka. In waqtiga, aad jiidi karaan slider si uu u sameeyo music ugu wanaagsan ee ku habboon ee sawiro iyo videos. Haddii aad u baahan tahay inaad wax ka bedel music ah, double guji clip iyo in ay suuqa kala pop up, jar music iyo qabsato mugga music sida aad jeceshahay.
Talo: Haddii aad rabto in aad waafajinta music asalka la slideshow ah, guji "Settings" (waa ku geeska midig ee sare) iyo dooran "Cod iyo Muqaal" tab, markaas sax checkbox hoos " waafajinta ". Ugu dambeyntii, guji "OK" badhanka.
3 Hababka movie Dooro iyo dar qurxinta
Waxaa sidoo kale jira 480+ Hababka lacag la'aan ah iyo saameynta kala guurka in loo isticmaali karaa sawir slideshow aad la music in tab this. Dooro Hababka aad jeceshahay oo jiidi on sawirada. Waxa kale oo aad ku dari kartaa decoration qoraalka, clipart iyo saamaynta on your photos digital. Si aad ku darto oo xiiso dheeraad ah, waxa kale oo aad ku dari kartaa filim Intro iyo movie credit in aad sawir slideshow music adigoo riixaya "Intro / Credit" dhisi-in button.
4 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo badbaadin aad slideshow music
Tag "naadiya" tab, waxaad ku eegaan karo video sawir by riix badhanka eegis ugu horeysay ka. Markaasaa waxaa u daabacaan in qaabka aad rabto. Haddii aad rabto in aad daawato slideshow sawir aad la music in iPod ama iPhone, si fiican u aad daabici lahaa inaan qaab MP4. Tani software slideshow sidoo kale awood u aad si toos ah wadaagno slideshow in YouTube by buuxinta macluumaadka lagama maarmaanka ah. Ka sokow, waxaad gubi karo DVD slideshow music adigoo riixaya "Guba si DVD" button iyo gelinaya DVD disc ah in your computer.